Ciidanka AMISOM oo maanta si rasmi ah ula wareegay ammaanka guud ee xarunta madaxtooyadda Galmudug - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ee dhawaan la geeyay magaaladaasi ay gebi ahaan la wareegeen ammaanka guud ee xarunta madaxtooyadda maamulka Galmudug.
Ciidamadaasi oo isugu jira Jabuutiyaan iyo kuwa Burundi ee AMISOM ayaa saldhigyo waaweyn ka sameystay xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug ee magaalada Cadaado, iyagoona sidoo kale xiray dhamaan wadooyinka soo gala halkaas.
Ciidankaas ayaa sidoo kale la sheegay inay xarumo ka sameysteen goobaha ay madaxtooyadda ka degan yihiin guddiga doorashadda dalka iyo sidoo kale kontoroolka laga soo galo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Qorshaha ayaa ah in ciidankaasi ay qeyb ka noqdaan ciidamo la qorsheeynayo in magaalada Cadaado laga howlgeliyo, xilliga ay doorashooyinka dalka ka socdaan deegaanada Galmudug.
Deegaanada Galmudug, gaar ahaan magaalada Cadaado waxaa haatan si weyn looga dareemayaa diyaar-garow ku aadan doorashada dalka ka dhici doonta sanadkaan, iyadoona dhawaan la qorsheeynayo in halkaasi ay ka dhacaan doorashada Aqalka Hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, ciidamada AMISOM ayaa dhawaan saldhig uga sameystay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado, waxaana magaalada dhawaan la geeyay boqolaal ciidamo oo ka socda Jabuuti iyo Burundi oo qeyb ka ah ciidanka AMISOM.